သခငျရဲ့နားကွပျကို ဖကျြဆီးမိလို့ မွှအေစားထိုးယူလာပေးတဲ့ ကွောငျလေး
Homenewsသခငျရဲ့နားကွပျကို ဖကျြဆီးမိလို့ မွှအေစားထိုးယူလာပေးတဲ့ ကွောငျလေး
သခငျရဲ့နားကွပျကို ဖကျြဆီးလိုကျပွီး တောငျးပနျတဲ့အနနေဲ့ မွှယေူလာပေးတဲ့ကွောငျလေး
ကွောငျတှကေ တဈခါတဈလမှော ခဈြစရာ ကောငျးပမေယျ့ တဈခါတဈလေ ကတြော့လညျး ဘယျလိုမှနျးကို မသိအောငျ နားလညျရ ခကျပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အပွုအမှုလေးတှကေို မခဈြဘဲလညျး မနနေိုငျပါဘူး။ ကွောငျလေးတှရေဲ့ တဈမူထူးခွားတဲ့ အပွုအမှုလေးတှကေ လူတှကေို အံ့အားသငျ့စပေါတယျ။ ကွောငျလေးတှဟော သူတို့တတျနိုငျတဲ့ နညျးလမျးလေးတှနေဲ့ လူတှကေိုလညျး ပြျောရှငျစပေါတယျ။
မကွာသေးခငျက ကွောငျပိုငျရှငျ တဈယောကျက သူ့ရဲ့ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ကွောငျလေးအကွောငျးကို Facebook မှာ တငျခဲ့ပါတယျ။ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံက Haryanto Phrewhirra Ramadhani ဆိုသူဟာ သူ့ကွောငျလေးရဲ့ နောကျတီးနောကျတောကျ ဓာတျပုံလေးနှဈပုံကို Facebook က Kami Pecinta Kuacin Group မှာ ဧပွီ ၃၀ ရကျနကေ့ တငျခဲ့ပါတယျ။ သူတငျခဲ့တဲ့ ဓာတျပုံကို Facebook မှာ Share သူပေါငျး ၆၆၀၀ ရှိခဲ့ပါတယျ။
ကွောငျလေးက Haryanto ရဲ့ နားကွပျလေးကို နှဈပိုငျးပွတျအောငျ ကိုကျလိုကျကွောငျး၊ ကွောငျလေးကို ဆူလိုကျတဲ့အတှကျ ကွောငျလေးက အိမျမှထှကျသှားကွောငျး၊ တဈနာရီ အကွာမှာ ကွောငျလေး ပွနျရောကျလာကွောငျး၊ ကွောငျလေးက သခငျ့အတှကျ လကျဆောငျတဈခု ပါလာကွောငျး Facebook မှာ တငျခဲ့ပါတယျ။ ကွောငျလေးက သခငျအတှကျ ဘာလကျဆောငျ ယူလာတယျလို့ ထငျပါသလဲ ?? ။
သခငျကို တောငျးပနျခငျြနတေဲ့ ကွောငျလေးက သခငျ့အတှကျ မွှပေေါကျစလေး တဈကောငျကို ယူလာခဲ့ပေး ပါတယျ။ မွှပေေါကျစလေးဟာ ကွောငျလေးကနေ သခငျ့ကို တောငျးပနျတဲ့ လကျဆောငျလေးပါပဲ။ ပကျြသှားတဲ့ နားကွပျကွိုးနရောမှာ အစားထိုးဖို့ ကွောငျလေးကို ယူလာခဲ့တာပါ။ ကွောငျလေးက မွှကေို ကွိုးနဲ့ တူတယျလို့ ထငျသှားပုံ ရပါတယျ။ အငျတာနကျ အသုံးပွုသူတှကေ ကွောငျလေးရဲ့ ဉာဏျကောငျးမှုကို ခြီးကြူးကွပါတယျ။
Haryanto က ကွောငျလေးရဲ့ တောငျးပနျမှုကို လကျခံပွီး ခှငျ့လှတျပေးခဲ့ ပါတယျ။ Haryanto က နားကွပျတဈခုကို ထပျဝယျခဲ့ပမေယျ့ အဆော့သနျတဲ့ ကွောငျလေးက နားကွပျကို ထပျပွီးတော့ ကိုကျလိုကျပါတယျ။ ဒီတဈခါတော့ ကွောငျလေးကHaryanto က ကွောငျလေးကိုမဆူရဲတော့ ပါဘူး။ ကွောငျလေးက သခငျကို တောငျးပနျတဲ့အနနေဲ့ နောကျထပျမွှတေဈကောငျ ထပျယူလာမှာ စိုးလို့ပါ။
သခင်ရဲ့နားကြပ်ကို ဖျက်ဆီးမိလို့ မြွေအစားထိုးယူလာပေးတဲ့ ကြောင်လေး
ကြောင်တွေက တစ်ခါတစ်လေမှာ ချစ်စရာကောင်းပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ ကျတော့လည်း ဘယ်လိုမှန်းကို မသိအောင် နားလည်ရ ခက်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုအမှုလေးတွေကို မချစ်ဘဲလည်း မနေနိုင်ပါဘူး။ ကြောင်လေးတွေရဲ့ တစ်မူထူးခြားတဲ့ အပြုအမှုလေးတွေက လူတွေကို အံ့အားသင့်စေပါတယ်။ ကြောင်လေးတွေဟာ သူတို့တတ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ လူတွေကိုလည်း ပျော်ရွှင်စေပါတယ်။
မကြာသေးခင်က ကြောင်ပိုင်ရှင် တစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကြောင်လေးအကြောင်းကို Facebook မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက Haryanto Phrewhirra Ramadhani ဆိုသူဟာ သူ့ကြောင်လေးရဲ့ နောက်တီးနောက်တောက် ဓာတ်ပုံလေးနှစ်ပုံကို Facebook က Kami Pecinta Kuacin Group မှာ ဧပြီ ၃၀ ရက်နေ့က တင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတင်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံကို Facebook မှာ Share သူပေါင်း ၆၆၀၀ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကြောင်လေးက Haryanto ရဲ့ နားကြပ်လေးကို နှစ်ပိုင်းပြတ်အောင် ကိုက်လိုက်ကြောင်း၊ ကြောင်လေးကို ဆူလိုက်တဲ့အတွက် ကြောင်လေးက အိမ်မှထွက်သွားကြောင်း၊ တစ်နာရီ အကြာမှာ ကြောင်လေး ပြန်ရောက်လာကြောင်း၊ ကြောင်လေးက သခင့်အတွက် လက်ဆောင်တစ်ခု ပါလာကြောင်း Facebook မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။ ကြောင်လေးက သခင်အတွက် ဘာလက်ဆောင် ယူလာတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ ?? ။
သခင်ကို တောင်းပန်ချင်နေတဲ့ ကြောင်လေးက သခင့်အတွက် မြွေပေါက်စလေး တစ်ကောင်ကို ယူလာခဲ့ပေး ပါတယ်။ မြွေပေါက်စလေးဟာ ကြောင်လေးကနေ သခင့်ကို တောင်းပန်တဲ့ လက်ဆောင်လေးပါပဲ။ ပျက်သွားတဲ့ နားကြပ်ကြိုးနေရာမှာ အစားထိုးဖို့ ကြောင်လေးကို ယူလာခဲ့တာပါ။ ကြောင်လေးက မြွေကို ကြိုးနဲ့ တူတယ်လို့ ထင်သွားပုံ ရပါတယ်။ အင်တာနက် အသုံးပြုသူတွေက ကြောင်လေးရဲ့ ဉာဏ်ကောင်းမှုကို ချီးကျူးကြပါတယ်။
Haryanto က ကြောင်လေးရဲ့ တောင်းပန်မှုကို လက်ခံပြီး ခွှင့်လွှတ်ပေးခဲ့ ပါတယ်။ Haryanto က နားကြပ်တစ်ခုကို ထပ်ဝယ်ခဲ့ပေမယ့် အဆော့သန်တဲ့ ကြောင်လေးက နားကြပ်ကို ထပ်ပြီးတော့ ကိုက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကြောင်လေးကHaryanto က ကြောင်လေးကိုမဆူရဲတော့ ပါဘူး။ ကြောင်လေးက သခင်ကို တောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့ နောက်ထပ်မြွေတစ်ကောင် ထပ်ယူလာမှာ စိုးလို့ပါ။